တရုတ်ချောမွေ့စွာအလွိုင်းသံမဏိဘွိုင်လာသွယ်တန်းထားသောပိုက် Superheater အလွိုင်းပိုက်အပူ Exchange Tube ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | ရွှေ Sanon
စံ: ASTM လုပ် SA 213
grade Group မှ: T5, T9, T11, T22 စသည်တို့ကို
အထူ: 0.4-12.7 မီလီမီတာ
ပြင်အချင်း (က Round): 3.2-127 မီလီမီတာ
လျှောက်လွှာ: ဘွိုင်လာပိုက် / heat exchanger ပိုက်
အပူကုသမှု: ပုံမှန် / ဒေါသ / Annealing
အသုံးပြုမှု: စူပါအပူ, ဘွိုင်နှင့်အပူ Exchange
စမ်းသပ်ခြင်း: Insight web studio ၏ / UT
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောဖိအားဘွိုင်လာပိုက်, heat exchanger ပိုက်များနှင့်စူပါအပူပိုက်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်းသံမဏိပိုက်စေရန်အသုံးပြုသည်
အရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်းသံမဏိတန်း: T2, T12, T11, T22, T91, T92 စသည်တို့ကို
ကို C si MN : P, S ကိုမက်စ် CR mo ni မက်စ် V ကို အယ်လ်မက်စ် W က B က
T2 0.10 ~ 0,20 0.10 ~ 0,30 0,30 ~ 0,61 0,025 0.50 ~ 0,81 0,44 ~ 0,65 - - - - -
T11 0.05 ~ 0,15 0.50 ~ 1.00 0,30 ~ 0,60 0,025 1.00 ~ 1.50 0,44 ~ 0,65 - - - - -
T12 0.05 ~ 0,15 မက်စ် 0.5 0,30 ~ 0,61 0,025 0,80 ~ 1.25 0,44 ~ 0,65 - - - - -
T22 0.05 ~ 0,15 မက်စ် 0.5 0,30 ~ 0,60 0,025 1,90 ~ 2,60 0,87 ~ 1,13 - - - - -
T91 0,07 ~ 0,14 0,20 ~ 0.50 0,30 ~ 0,60 ၀.၀၂ 8.0 ~ 9.5 0,85 ~ 1.05 0.4 0.18 ~ 0.25 0,015 - -
T92 0,07 ~ 0,13 မက်စ် 0.5 0,30 ~ 0,60 ၀.၀၂ 8.5 ~ 9.5 0,30 ~ 0,60 0.4 0,15 ~ 0.25 0,015 1.50 ~ 2,00 ~ 0,006 0,001
အထက်တွင်ထက်အခြား T91 ဘို့လည်းနီကယ် 0.4, VA 0.18-0.25, နီ 0.06-0.10, နီ 0.03-0.07, အယ်လ် 0.02, Ti 0.01, ZR 0.01 ပါဝင်သည်။ အပိုင်းအခြားသို့မဟုတ်နိမ့်ဆုံးညွှန်ပြနေသည်မဟုတ်လျှင်တစ်ဦးကအများဆုံး။ ဘဲဥပုံ ( ... ) ဒီအ table ထဲမှာပေါ်လာဘယ်မှာရှိ, ထိုဒြပ်စင်လိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်သို့မဟုတ်သတင်းပို့ခြင်းကိုမအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှိသေး၏။ B ကဒါဟာ 0,045 max ကိုတစ်ဦးဆာလဖာအကြောင်းအရာနှင့် T2 နှင့် T12 ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကို C တနည်း, ဒီအချိုးနိမ့်ဆုံး၏အစား, ပစ္စည်းအခန်းအပူချိန်ဖို့ပေမယ့်ကြိုတင် tempering မှ austenitizing နှင့်အအေးပြီးနောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မာကျောအခြေအနေအတွက် 275 HV ၏နိမ့်ဆုံးခိုင်မာသောမူလိမ့်မည်။ ခိုင်မာသောစမ်းသပ်ခြင်းထုတ်ကုန်၏ Mid-အထူမှာဖျော်ဖြေရလိမ့်မည်။ ခိုင်မာသောစမ်းသပ်အကြိမ်ရေအပူကုသမှုတွေအများကြီးနှုန်းထုတ်ကုန်နှစ်ခုနမူနာဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်ခိုင်မာသောစမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာအပေါ်အစီရင်ခံရလိမ့်မည်။
သံမဏိအဆင့် စက်မှု Properties ကို
T. S က Y. P ကို elongated ခိုင်မာသော
T2 415MPa ≥ 205MPa ≥ ≥ ၃၀% 163HBW (85HRB)
T11 415MPa ≥ 205MPa ≥ ≥ ၃၀% 163HBW (85HRB)
T12 415MPa ≥ 220MPa ≥ ≥ ၃၀% 163HBW (85HRB)
T22 415MPa ≥ 205MPa ≥ ≥ ၃၀% 163HBW (85HRB)
T91 585MPa ≥ 415MPa ≥ ≥ 20% 250HBW (25HRB)
T92 620MPa ≥ 440MPa ≥ ≥ 20% 250HBW (25HRB)
မျိုးကွဲများအပါအဝင်။ 0,15 ကျော်
မျိုးကွဲများအပါအဝင် 0.18 ကျော်
4inch နှင့် 400​​င် 35 ဦးပါ0င် 33 ဦးပါ0င် 28 ပါ0င်အောက်မှာ
35033028 .. .. လက်မ4ကျော်ပါ0င်
11/2 နှင့်အောက်တွင် 200င်
11/2 ကျော် 220င်
ရှင်းပြီသို့မဟုတ်ချောအအေးအဖြစ်နံရံအထူအတွက်ခွင့်ပြုမူကွဲ, ပြည်တွင်းရေး-စိတ်ဆိုးပြွန် မှလွဲ. သာပြွန်လျှောက်ထား
နှင့်မီ, swaging တိုးချဲ့, ကွေး, polishing သို့မဟုတ်အခြားထည်လုပ်ငန်းများ
အပြင်ဘက်အချင်း (မီလီမီတာ) Pemitted မူကွဲ (မီလီမီတာ)
ပူချောချောမွေ့စွာပြွန် ကျော်လွန် အောက်
4 "(100mm) နှင့်အောက်တွင် 0.4 ၀.၈
4-71 /2"(100-200mm) 0.4 ၁.၂
71 / 2-9 "(200-225) 0.4 ၁.၆
under1 "(25mm) ၀.၁ 0,11
/21-11 "(25-40mm) 0,15 0,15
/22-21 "(50-65mm) 0.25 0.25
21 / 2-3 "(65-75mm) ၀.၃ ၀.၃
71 / 2-9 "(200-225) 0,38 ၁.၁၄
အဆိုပါသံမဏိပိုက်ဟိုက်ဒရောလစ်တစ်ခုမှာအားဖြင့်တစ်ဦးကိုစမျးသပျသငျ့သညျ။ အဆိုပါအများဆုံးစမ်းသပ်ဖိအား 20 MPa ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဖိအားလက်အောက်တွင်အဆိုပါတည်ငြိမ်ခြင်းအချိန်သင့်မထက်နည်း 10 S ကို၎င်း, ထိုသံမဏိပိုက်သင့်မယိုစိမ့်ခြင်းရှိကြလော့။ သို့မဟုတ်အဆိုပါ Hydraulic စမ်းသပ်ခြင်း Eddy Current စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သံလိုက် flux ယိုစိမ့်စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ်စစ်ဆေးရေးတောင်းဆိုဒါကပိုက် Ultrasonically စစ်ဆေးရေးတစ်ခုမှာအားဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါညှိနှိုင်းပြီးနောက်အဆိုပါပါတီနှင့်အဆိုပါသဘောတူညီချက်ခုနှစ်တွင်အဆိုပါစာချုပ်သတ်မှတ်ပါတယ်, အခြားက Non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်း Added Be နိုင်သလားလိုအပ်သည်။
တစ်ခုကအပြင်အတူပြွန်အချင်း သာ. ကွီးမွတျသန်း 22 မီလီမီတာတစ်ဦးကပြစ်စမ်းသပ်ခြင်းခြင်းကိုဖြစ်စေ။ အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင် Delamination, အဖြူရောင်အစက်အပြောက်ဒါမှမဟုတ်အညစ်အကြေးတစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်မှုအတှငျးဖွစျသငျ့။
အတန်း P91 ၏ပိုက်များအတွက်, P92, P122, အ P911, Brinell, Vickers, ဒါမှမဟုတ် Rockwell ခွန်အားဖြစ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီလောတနေဖန်ဆင်းတော်တွင်တစ်ဦးကနမူနာဖြစ်ရလိမ့်မည်
ယခင်: ချောမွေ့စွာအလွိုင်းသံမဏိပိုက် ASTM A335 စံမြင့်သောဖိအားဘွိုင်လာပိုက်
နောက်တစ်ခု: Case နှင့် Tube API ကို SPECIFICATION 5CT နဝမဆောငျးပါးမြား-2012 specification
heat exchanger ပြွန်